warkii.com » Man United & Chelsea Oo Guulo Ugu Soo Baxay Champions League, Solskjaer Oo Ka Sarre Maray Lampard, Leicester Iyo Wolves Oo La Niyadjabiyay
Man United & Chelsea Oo Guulo Ugu Soo Baxay Champions League, Solskjaer Oo Ka Sarre Maray Lampard, Leicester Iyo Wolves Oo La Niyadjabiyay
Man United ayaa xaqiijisatay u soo bixitaankeeda Champions League iyagoo ku dhameysatay kaalinta 3aad ee xilli ciyaareedka Premier League ka dib markii ay 1-0 isaga reebeen kooxdii ku dheganeyd ee Leicester City, waxay isku dhibco yihiin Chelsea oo sidoo kale soo baxday balse farqiga goolasha ayay kaalinta 3aad ku soo gashay Red Devils.
Gool rigoore ah uu saxiixay Bruno Fernandes qeybtii labaad ee ciyaarta ayay Manchester United ku soo baxday iyadoo Leicester ay ku dhameysatay kaalinta 5aad una soo baxday Europa League.
Manchester United iyo Leicester City waxa uu kulankani u ahaa guul ama geeri iyada oo labada kooxoodba ay haysteen fursad ay ugu soo baxayeen Champions league balse waxay tartan kula jireen Chelsea oo qaybtii hore ee kulankii Wolves laba gool hogaanka ku haysay.
Man United waxay kulankan uga baahnayd babraro kaliya si ay ugu soo baxdo Champions League laakiin Leicester City ayaa ku qasbanayd in ay guul gaadho balse ciyaarta ayaa ahayd mid aan waxba layskula hadhin oo lugaha lays goosanayay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa noqotay mid gool la’aan ah inkasta oo ay Leicester City goolal u dhalin gaadheen Iheanacho iyo Ndidi.
Goolhaye David De Gea ayaa qaybtii hore sameeyay qalad wayn oo sabab u noqon gaadhay in Leicester City ay gool dhaliso waxaana jiray walal haystay jamaahiirta United oo ay ka cabsi qabeen in De Gea uu qaladaad xun sameeyo.
Laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kalanastay barbaro gool la’aan ah laakiin Man United iyo Lieceter City ayaa waqtigii nasashada ogaaday in Chelsea oo ay la tartamayeen ay 2-0 hogaanka kaga haysay Wolves.
Qaybtii labaad ee ciyaarta Leicester City ayaa ku jirtay dagaal waali ah waxayna United ahayd mid cadaadis ka dareemaysya weerarka Foxes balse Red Revils ayaa baadi goob ugu jirtay in ay hesho fursad ay Leicester City xaalada ugu sii xumayso.
Leicester City ayaa noqotay koox weerar badan ku ciyaaraysay iyada oo Rodgers uu isbadalo sameeyay laakiin fursad luminta weerarka Foxes ayaa Man United waxtar badan u ahayd..
DAQIIQADII 69 AAD Man United ayaa rekoodhe lagu abaal mariyay kadib markii uu Evans qalad ku galay Martial kadib markii uu Choudhury kubbad dilaa ah lumiyay waxaana Foxes lagu dhigay rekoodhaha wadnaha hoos u gooyay.
DAQIIQADII 71 AAD Waxaa Man United goolka qiimaha wayn lahaa ee rekoodhaha ah u saxiixay Bruno Fernandes kaas oo jahada qaldan u diray goolhayaha Leicester City waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Man United ku heshay gool dhulka dhigay Leicester City.
Daqiiqadii 76 aad Alla Maxay Fursad Badbaadin ahayd! Goolhaye David De Gea ayaa gool badbaadin wayn ka sameeyay Barnes oo kubbad meel dhaw kaga taabtay waxayna Leicester City sii waday khasaarinta fursadaha waa wayn.
Man United ayaa bixinaysay fursado ay Leicester City si buuxda ciyaarta ugu soo laaban kartay balse cadaadiska ciyaartu ku haysay xidigaha Liecester City ayaa u diidaysay in ay deganaansho gool ku raadiyaan.
Leicester City waxaa dhamaadkii ciyaarta casaan ka qaatay Jonny Evans iyadoo Jesse Lingard uu gool labaad u dhaliyay Man United waqtigii dhimashada ciyaarta ka dib qalad weyn uu sameeyay goolhaye Kasper Schmeichel iyadoo Lingard uu kubada ku taabtay shabaq faaruq ah.
Ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Man United guusha ku raacday iyagoo u soo baxay Champions League.
Dhanka kale Chelsea ayaa xaqiijisatay u soo bixitaankeeda tartanka UEFA Champions League ka dib markii ay ku 2-0 ku suuldaareen kooxda Wolves oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge, iyadoo Wolves ay ku hungowday inay u soo baxdo Europa League.
Blues ayaa kaliya u baahneyd hal dhibic si ay u xaqiijisato booskeeda afarta sarre laakiin labo gool oo degdeg ah uu oo ay Chelsea dhalisay qeybtii hore ayay ku xaqiijisteen seddex dhibcood iyadoo tababare Lampard uu u dabaaldegay inuu kooxdiisa u soo saaray tartanka ugu xiisaha badan Yurub.
Chelsea ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 1aad ee afar daqiiqo oo lagu daray daray ciyaarta iyadoo Mason Mount uu gool qurux badan u dhaliyay halka daqiiqadii 4aad ee waqtiga dheeriga ee qeybtii hore ee ciyaarta uu Olivier Giroud keenay goolka labaad isagoo kubada dhinac mariyay goolhayaha ka dib kubad uu ka helay Mason Mount.
Labadaas gool ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Chelsea soo laabtay iyada oo masuuliyada ugu wayni ka saarnayd kaliya in ay hogaanka ciyaarta ilaashadaan isla markaana ay raadiyaan goolal kale marka ayna culays dareemayn.
Wolves ayaa dagaal wayn ugu jirtay in ay hesho xalkii ay ku dhaafi lahayd difaaca Chelsea balse ciyaarta qaybtii danbe ayaa noqotay mid adag oo ay Blues si adag u ilaashanaysay hogaanka.
Ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Chelsea ku badisay iyadoo Blues ay xaqiijisatay kaalinta afaraad ee horyaalka una soo baxday Champions League.
Kooxda Wolves natiijadaan waxay u aheyd musiibo madaama ay seegeen booska kaalinta 6aad ee Europa League loogu soo baxayo iyadoo Tottenham ay soo gashay booskaas.
Rajada kaliyta ee Wolves ay ka qabto inay u soo baxdo Europa League waa inay Chelsea ku guuleysato FA Cup oo ay garaacdo Arsenal